Chris Brown oo xabsiga la dhigay markale - iftineducation.com
iftineducation.com – Heesaaga Mareykanka u dhashay ee Chris Brown ayaa lagu xeray markale magaalada California ee dalkaasi kadib markii ay booliiska LAPD ku eedeeyeen inuu qori ku handaday haweeney la kaftameysay saaxiibkiis oo xernaa mujaawharaad isagoo ka carooday bistooladna kula booday gabadhaasi.
Muddo ay is hortaagnaayeen booliska kadib ayuu Chris Brown kasoo baxay aqalkiisa ayadoo isla markiina lagu tuuray xabsiga.
Booliiska ayaa sheegay in ay taleefoon qeylo dhaan ah ka heleen haweeneydan oo lagu magacaabo Baylee Curran ayna sheegtay in ay qatar gali laheyd hadii aysan kasoo gaarin lagana yaabay inuu toogto Chris Brown.
Waxey sheegtay in ay xaflad u tagtay aqalkiisa.
Fanaanka Chris Brown ayaa waxuu dhibaato horey sanadkii 2009 ugu geystay fanaanada Rihanna oo ay xeriir jaceyl lahaayeen asigoo si xun garaacay mar ay isku dhaceen deetana la hor geeyay caddaalada waxaana uu soo maray xabsi iyo ciqaabo kala duwan oo uu ku muteystay arintaasi.
Brown ayaa haatan waxaa lagu wadaa in lagu sii deeyo damaan iyadoo la baxinaayo lacag damaanad ah oo ilaa 250 dollarka Mareykanka ah.
Akshay Kumar filinkiisa Rustom oo hawada maraya iyo Hrithik Roshan oo flop noqday